Ampitomboy ny fivarotana tongotra an-tserasera sy amin'ny Internet miaraka amin'ny FATWIN | Martech Zone
Ampitomboy ny fivarotana an-tongotra sy ny Internet amin'ny FATWIN
Zoma, Septambra 20, 2013 Zoma, Septambra 20, 2013 Douglas Karr
Faly aho niara-nipetraka tamin'ny mpanorina sy ny ekipa tao FATWIN omaly rehefa nandefa ny beta tao amin'ny Fihaonambe M-Tech any Indianapolis. Scott no mpiara-manorina sy filoha mpitantana ny Orinasa CIK, orinasa rindrambaiko sy serivisy marketing azo refesina izay nanampy orinasa nandritra ny folo taona izao. CIK dia nanangana FATWIN ™, sehatra teknolojia marketing izay manampy ny orinasa mitondra fiara fifamoivoizana an-tranonkala sy fivarotana amin'ny alàlan'ny lalao, fifaninanana ary fanavotana loka.
Eo amin'ny sehatry ny varotra ankehitriny, ny orinasa dia miatrika fanamby amin'ny fanatanterahana sy ny fanamarinana ny fampiroboroboana incentivised. Miaraka amin'ny FATWIN dia mametraka lalao sy fifaninanana kalitao haingana izahay izay mampitombo ny fivezivezena an-tongotra na fifamoivoizana an-tserasera ary amin'ny farany, ny fiovam-po. Scott Hill, mpiara-manorina ary filoha mpitantana ny orinasa CIK.
Ny efijery mpandresy miaraka amin'ny lisitry ny loka sy ny fanavotana aseho ary koa ny fanolorana vokatra.
Ny efijery FATWIN Kiosk miaraka amina fanamarihana tokana sy mangarahara momba ny mpandresy loka.
Doka an-tserasera izay mitondra olona mankany amin'ny fifaninanana an-tserasera na mankany amin'ny magazay fivarotana misy kioska.
Doka fanontana nentim-paharazana izay mitondra olona mankany amin'ny fifaninanana an-tserasera na mankany amin'ny magazay fivarotana misy kioska.
Fifaninanana FATWIN hilalaovana miaraka amin'ireo loka mazava tsara voamarika eo ambaniny.
CIK dia nanampy ny orinasa hitarika fitarihana amin'ny alàlan'ny media mahazatra sy an-tserasera nandritra ny folo taona mahery ary nahita olana lehibe vitsivitsy izy ireo FATWINNametraka fitsaharana i FATWIN:
Trust - 9% monja amin'ireo mpitsidika no matoky fa manan-kery ny fifaninanana ary omena tokoa ny loka. Ny fidiran'ny FATWIN mangarahara amin'ny fidirana an-tserasera sy ny fampidirana ara-tsosialy no manamboatra izany. rehetra ny mpandresy dia apetraka ampahibemaso amin'ny fotoana tena izy amin'ny fivarotana antsinjarany - amin'ny alàlan'ny kiosk, ary amin'ny microsite ho an'ny fifaninanana.
Aterineto sy ivelan'ny Internet - betsaka ny fifaninanana pirinty sy mailaka mivantana. Ary be dia be ny fifaninanana amin'ny Internet. Na izany aza, tsy mbola nisy sehatra iray natambatra mba hampandehanana ny fifamoivoizana an-tserasera sy ivelan'ny Internet mankany amin'ireo mpivarotra sy orinasa. Ny fampidirana kiosk an'ny FATWIN eo amin'ny outlet, ny serivisy fanontana ary ny microsite dia manambady ary mitondra roa.
mandrisika - Matetika ny orinasa dia tsy manana loharanom-pahasoavana ahazoana loka manintona hanentanana ireo olona manantena hamaly. Ny loka CIK dia manome loka ny lokony ka manintona tokoa izy ireo. Misy aza ny jackpot mandroso miaraka amin'ny serivisy (efa ho 40,000 3.7 $ izao). Hatramin'izao, ny serivisy dia nanome $ XNUMX tapitrisa mahery - zahao ny FATWIN tranokala ho an'ny mpitsikilo mivantana.
Expertise - Raha vokatra ny FATWIN, dia miaraka amina ekipa matihanina mahalala ny fomba hanaovana fifaninanana izay mitarika fitarihana ho an'ny orinasanao. Ny FATWIN dia mitantana ny lafiny ara-dalàna sy ara-dalàna rehetra amin'ny fifaninanana… manampy amin'ny fampidirana ireo fanontaniana mitarika ianao hahafahanao mahafeno fepetra ireo mpitarika ary mahazo ny valiny!
Ny fitarihana dia aseho mazava tsara miaraka amin'ny angon-drakitra efa voamariny ho an'ny ekipan'ny varotrao hanenjika azy ireo.
Mampiseho ny loharanom-pifamoivoizana rehetra resahina ny FATWIN - ao anatin'izany ny fivarotana antsinjarany.
FATWIN mitaona ny mpanjifa hitahiry vola, hahazo loka ary hampiala voly amin'ny lalao manana marika kalitao avo lenta izay manandratra fampiroboroboana an-tserasera sy amin'ny fivarotana. Ireo orinasa dia afaka mampiasa ny sehatra hahazoana mpanjifa vaovao, mamorona fitarihana ary manara-maso ny valiny eo noho eo amin'ny alàlan'ny interface dashboard analytical FATWIN.
Ny tranonkala dia loharanom-bola azo antoka azo antoka
Cinegif: Design Cinemagraphs sy Animated Gifs